windows 8 | အိမ့်မှူးသော်
ရှေ့ကပြောတိုင်းမသိဘဲ လိုက်လုပ်မလား ၊ သိအောင်ကြိုးစ...
နှလုံးသားကို အသုံးပြုပြီး အသက်ရှင်ပါ။ ဦးနှောက်ကို...
Hard Disk ကို ဘာကြောင့် Defragment လုပ်သင့်သလဲ ??
Firefox မှာ Save and Quit နဲ့ထွက်မယ်
Firefox Bookmark အားသိမ်းထားခြင်း
တွေ့ရခဲသော သန္ဓေသား လေးများ
ဆော့ဝဲမသုံးဘဲ Desktop ကို ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်
gtalk အကောင့်ဟောင်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို gtalk အ...
အိပ်ဆေးမလိုဘဲ အိပ်ပျော်စေနည်း (၅)မျိုး
လက်ရှိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဗောဓိတစ်ထောင် ရပ်တော်မူဘုရာ...
Folder လေးတွေကို color ပြောင်းမယ်
မိမိကွန်ပျူတာကို USB အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့မရစေရန်
ကွန်ပျူတာ Desktop background ကို video လေးထားမယ်
ထမင်းစားပြီးလျှင် ရှောင်ကျဉ်သင့်သော အချက်များ
VGA (Video Graphics Array)အကြောင်း(၃)
နွားနို့သောက်ခြင်းဖြင့် အရိုးပွရောဂါ နှင့် ကင်ဆာရေ...
windows password ကို သူများပြောင်းလို့မရအောင်လုပ်န...
Serial Key ရှာနည်း
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးခြင်း နှင့် ဦးနှောက်ကင်ဆာ
ကွန်ပျူတာ ၀င်းဒိုး ဘယ်ချိန်တင်လဲကြည့်မယ်
သိပ္ပံပညာရှင်များ ဗုဒ္ဓ၏ စွယ်တော်(သွား)ကို စစ်ဆေးကြ...
windows7start menu in windows 8
windows7ပဲသုံးနေတာ ငြီးငွေ့လာရင် windows 8 လေး ပြောင်းသုံးချင်သူများအတွက် ပါ။ ပုံစံကတော့ windows7နဲ့သိပ်တော့မကွာပါဘူး။ နည်းနည်းလေးပါပဲ ။ ဒါပေ့မယ့် အသစ်စမ်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ Coronary Artery Disease လို့ခေါ်တယ်။ နှလုံးကြွက်သား ပျက်စီးတတ်တဲ့ အတွက် Coronary Heart Disease လို့လည...
ကွန်ပျူတာမှာ cmd ကို disable ပြုလုပ်ခြင်း
မိမိကွန်ပျူတာကို အခြားတစ်ယောက်အား ခေတ္တငှားရမည့်အခါမျိုးတွင် Command Prompt ကို Disable ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာကို အတန်အသင...